नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद : दलाल पुँजिवाद फेरिएन भने हामी नै फेरिन्छौँ - Namaste Post
नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद : दलाल पुँजिवाद फेरिएन भने हामी नै फेरिन्छौँ
घनश्याम भुषाल २०७६, ८ आश्विन बुधबार १२:४० 0
अहिले जताततै समाजवादको कुरा निकै व्याप्त छ। यो यति धेरै व्यापक चल्दैछ कि भविष्यमा केही ठूला अन्तरविरोधहरु पनि सृजना गर्दैछ जस्तो लागेको छ। यदि यसलाई हामीले अझैँ राम्रो गरी हामीले ल्याउन सकेनौँ, भन्न सकेनौँ बताउन सकेनौँ र समाजलाई त्यसतर्फ डोहोर्‍याउन सकेनौँ भने यसले ल्याउने भनेको अन्तरविरोध नै हो।
यसैपनि मनोवैज्ञानिक रुपले अहिले नै कोही नाङ्गो मान्छे फ्याट्ट बाटोमा निस्केर ‘समाजवाद कहाँ छ ?’ भनेर सोध्यो भने, हामी नेता र पार्टीहरुले ‘समाजवाद संविधानमा छ, समाजवाद भनि त सकियो, यही हो’ भनेर उम्किने जस्तो अवस्था छ। अनि उसले ‘यही होे भने त पञ्चायतमा पनि थियो, राजतन्त्रमा पनि थियो’ भनेर लाठि लिएर खडा हुने सम्भावना देखिन्छ। हामीले संविधान देखाउने मान्छे लाठि लिएर खडा हुनेजस्तो भविष्य समाजवादका वरीपरी देख्छु। चर्चाका हिसाबले यो अन्यन्तै ‘पपुलर’ कुरा छ।
एउटा चीनियाँ दन्त्य कथा छ, ‘चिनियाँ सभ्यातामा अगाडिदेखि ड्रयागन असाध्यै प्रिय मानिन्छ। ड्रयागनको धेरैले पुजा गर्थे। एउटी युवतिले अझैँ धेरै चाहन्थिन्, उनी ड्रयागनलाई सपनामा, विपनामा, भित्तामा, कापिमा, देख्थिन्। जब ड्रयागन साक्षात अवतरित भए त्यस पछाडि तिनी बेहोस भईन्’ भन्ने छ। किनभने उनका लागि त्यो निकै डरलाग्दो थियो। हामीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै समाजवादको नारा लगायौँ। अब अलि साँच्चिकै समाजवादको संगठिन प्रयत्न हुँदैछ, भन्ने भएपछि राजनीतिक क्षेत्रका संस्थापनहरु डराउँदैछन् कि ? अथवा, समाजवादको यस्तो एउटा रंगमञ्च भनौँ, जुन देखेर मानिस डराएर भागि रहेको छ। त्यसको अग्रभागमा ठूलो पदमा आशिन, त्यसपछाडि सचिवालय, हुँदैहुँदै स्थायि समिति आदि आफ्नो गक्षअनुसार भाग्ने सुर कसिरहेको जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीमै देखिदैछ।
अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा समाजवाद भनेको ईश्वरजस्तो। हाम्रो उपनीषदहरुमा ईश्वरको चर्चा छ। कस्तो हुन्छ ? अदृश्य छ। छुन पनि सकदैन, देख्न पनि सकिदैन तर, सबै ठाउँमा छ। सबै ठाउँमा छ भन्छ, नदेखिन्छ नभेटिन्छ। भनेको हाम्रो देशमा पनि यत्रो ठूलो समाजवादी पार्टी छ। हाम्रो पार्टीमा पनि लामो समयदेखि समाजवाद भनेर तपस्यारत मानिसहरु छन्। असाध्यै ठूलो जनमत हो। तर, कहाँ छ समाजवाद भन्दा मानिसले विश्वास मानिरहेको छैन। हामीले जहाँजहाँ बताइरहेका छौँ मानिसले विश्वास गरिरहेको छैन। यसो हो भने क्षितिजमा कहीँ समस्या छ। समस्या आउँछन्, आउँदैछन्। एकपछि अर्को प्रश्न खडा भइरहेका छन् भने, प्रश्नहरु बढ्दै छन् भने…..।
एकपटक कलकत्ता युनिभर्सीटी पढाउने भरत बाबुले लेख्नुभएको थियो, ‘तपाईँको कसैले विरोध गर्छ, उसँग बैंक ब्यालेन्स छ, ठूलो जमिनदारी छ, जवारत छ, गाडी घोडा छ, तर तपाईको विरोध गर्दैछ भने नडराउनुहोस्। चिन्ता नगर्नुहोस्। तर छ्याक्क केही पनि नभएको मान्छे खेत खलियान्बाट उक्लिएर बाटोमा औँला उठायो भने डराउनुहोस्।’ त्यो समाधान पनि हो एक हिसाबले। आज पार्टी आयो, सरकार आयो, दुई तिहाई आयो लोकतान्त्रीक तरिकाले, संसदिय तरिकाले, सय वर्षको इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीले यत्रो जनमत पाएको कहीँ छैन भनेर हामीले भन्यौँ। तर बाहिर यत्रो अन्योल छ।
अपेक्षाहरु स्वभावैले ठूला थिए, बढी थिए। त्यो नभएपछि आम मानिसमा कहीँ निराशा भन्नुहोस्, कहीँ विरोध, कतै उद्धेलन त कतै प्रश्न सबै एकसाथ खडा हुँदैछन्। यसरी हेर्दा यो संकट हो। अहिलेको समाजवादी शिविरभित्रको यो उकुसमुकुस यदि अनियन्त्रित भइदियो भने नेपालको सन्दर्भमा असाध्यै ठूलो र डर लाग्दो दुर्घटना हुन्छ। एउटा गीतमा भनेजस्तै ‘हाम्रा बाले गर्देनने बे पनि, भत्काइदिन्छु बाख्राको खोर पनि’ भनेजस्तो भयो भने के हुन्छ ? यो असम्भव कुरा होइन। यो उकुसमुकसलाई इतिहासका शिक्षा र भविष्यका सम्भावनाहरु अगाडि राखेर सोच्दा धेरै चुनौती हुँदैनन्। हामी ठिकै ठाउँमा पुग्छौँ। त्यहाँ लैजान सकिन्छ। यस्ता विषयमा पार्टीका कमिटी र भेलाहरुमा छलफल हुनुपर्ने हो तर डेढ वर्षसम्म कतै भएन। यसको समाधान हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्ने हो।
हामीसँग समाजवादको कुनै मोडल छैन। जतिसूकै सुन्दर थियो भने पछि शोभियत मोडल असफल भयो। प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादीहरु थिए होलान्। त्यो मात्रै कारण हो ? यदि त्यसो हो भने त साम्राज्यवाद रहेसम्म क्रान्ति हुँदैन। त्यसो हो भने मान्छेको भाग्यमा साम्राज्यवाद बाहेक केही पनि लेखेकै छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले त्यो मात्रै कारण थिएन।
शोभियत क्रान्तिले मानव जीवनमा हेपिएका, लखेटिएका, चाँडै मर्ने, त्यतिवेलाको रसियाका मान्छेहरु जसको आयु करिब ३० वर्ष थियो, जो मान्छे जस्ता जनावर लाग्थे तिनीहरुले शासन सत्ता चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा इतिहासमा स्थापित गर्ने कुरा चानचुने थिएन। हामीले यो पढेर आयौँ, तर स्वभियत संघको असफलता के हो भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। हामीले यी तमाम प्रश्नको उत्तर दिन सकिएन भने यो दुई दिनको रामछायाँ मात्रै हुन्छ। हामीले हाम्रो प्रतिवद्धता समाजवादतर्फ नै हो भनेर लाग्यौँ भने यो असफल हुँदैन। किनभने विज्ञानमा असफलता भन्ने कुरै हुँदैन। दश वर्ष लगाएर कुनै रिसर्च गरियो र हामीले खोजिएको कुरा पत्ता लागेन भने ‘यसरी पत्ता लाग्दो रहेनछ’ भन्ने कुरा थपिन्छ। यसर्थ विज्ञानमा असफलता भन्ने हुँदैन।
भारतका एकजना माक्र्सवादी प्रोफेसर यजद अहमदले शोभियतसंघ ढलेपछि त्यसबारे एउटा लामो व्याख्यान गर्नुभएको छ, ‘मान्छे भन्छन् कि क्रान्ति असफल भयो। सम्पूर्ण इतिहासलाई साक्षी राखेर म भन्छु, क्रान्ति नपूर्णतः सफल हुन्छ न त असफल नै हुन्छ, यो जारी रहन्छ।’ एउटा ठूलो दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने क्रान्ति जारी रहने कुरा हो। आज बाँचेका मान्छेले परिवर्तनका लागि के गर्ने भन्ने कुरा हो। भोली के हुने भनेर हामीले आजै फैसला गरिदिन थाल्यौँ भने हतार हुन्छ। हाम्रो आग्रहले पिढी दरपिढीलाई बाध्ने कुरा गरिनु हुँदैन। हामी बाँचेका समयमा क्रान्तिका लागि के गर्नसक्छौँ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
समाजवाद मात्रै नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भनेपछि त्यो बढी मुर्त हुन्छ। देशैभरी परिक्षा भयो, उत्तर पुस्तीका बाँडेर ‘पशुपति कुन दिशामा पर्छ’ भन्यो भने विद्यार्थीले के लेख्छ ? तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट न पशुपति कता पर्छ भन्ने हुन्छ। इलामबाट हेर्दा पश्चिम पर्दो हो, महाकालीबाट हेर्दा पूर्व पर्दो हो। एउटै उत्तर हुँदैन। यसको मतलब हामी कुन सामाजिक, ऐतिहासिक राजनीतिक परिवेशमा छौँ भन्ने विषय नै हो।
संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा १५/१७ सालको काण्ड भनेको नयाँ आधुनिक दुनियाँ बन्ने नै भयो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभर बढेको विकास, आधुनिकतातर्फ समाज जाँदै थियो, त्यो कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने छिनाझप्टी थियो। त्यतिवेला विपी कोइराला यसै पनि उदार लोकतान्त्रीक चरित्रको मानिस हुनुहुन्थ्यो। त्यस प्रकारको राजनीतिलाई थेग्नेखालको उहाँको पार्टी थिएन। उहाँ उदार लोकतान्त्रीक खालको राज्य चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु तमाम जमिनदारहरु थिए। त्यसले गर्दा उहाँले जुन प्राप्त गर्नुपर्ने शक्ति थियो त्यो सम्भव नै भएन। कांग्रेसका नेता जमिनदार थिए, राजा महेन्द्र स्वयं जमिनदारका नेता थिए। त्यो सामाजिक परिवेशले राजा महेन्द्रलाई बलियो बनायो। अरु कुरा छोडेर राजा महेन्द्रले बनाउन लगाएको भूमिसुधार सम्बन्धि टंकप्रसाद आचार्यले बनाएको जत्तिको रिर्पोट हामीले बनाएका छैनौँ। तर त्यो लागू गर्दा मान्छेहरु कांग्रेसतर्फ बढी आकर्षित हुने भयले महेन्द्र त्यसबाट पछि हटे। त्यसपछि दरबारमा मोजमस्ती बढ्यो र साधन, स्रोत सम्पतिमाथि लुट मच्चाउन सुरु भयो। त्यसले मुलुकमा राष्ट्रिय पुँजी र औद्योगिकरणको विकास हुन सकेन। अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा दरबार दलाल पुँजीपतिहरुको नेता भइसकेको थियो भने पञ्चायत दलाल पुँजिवादको उपरिसंरचना बनिसकेको थियो।
पुँजीपतिले नेतालाई काम गराएवाफत पैशा दिन सुरु गर्छ। पैशा यति धेरै दिन्छ कि एकदिन त्यो दलाल पुँजीपति र हाम्रो नेताको हैसियत बराबर हुन्छ। हाम्रो नेताले नै अब दलाललाई पैसा दिन थाल्छ। अब दलाल र नेता दुवै एकै ठाउँमा आउँछन्। जब नेता र दलाल दुवै एकै ठाउँमा आएपछि अदालतलाई पनि आफ्नै ठाउँमा ल्याउँछन्। कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने ? कहिलेसम्म राख्ने, कहिलेसम्म नराख्ने ? तिनीहरु आफै गर्छन्। लडाइँ पनि गर्छन्, सल्लाह पनि गर्छन्। जस्तो लोकमानसिंह कार्कीलाई कसले ल्यायो, कसले पठायो भन्ने कसैलाई थाहा छ ? यो सबै दलाल सत्ताको स्थायित्वका लागि हुन्छ।
पञ्चायतको अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि पञ्चायत त्यतातिर रुपान्तरण भइसकेको थियो। हिजो सामन्ति दरबारबाट दलाल पुँजिवादी दरबारमा बदलिसकेको थियो। हामिले फाल्यौँ। किनभने भत्कदैँ गरेको सामन्तवादबाट निस्कदैँ गरेका मानिसहरुलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन थियो। ति मान्छे नयाँ जिन्दगी खोजिरहेका थिए। नयाँ जिन्दगी खोज्दै गरेका ति लाखौँ मानिस र नौ जवानलाई जब यसले सन्तुष्ट पार्न सकेन त्यसका विरुद्ध तिनीहरु लागे र त्यो सकियो।
हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ। प्रजातन्त्र आयो। तर त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले बनाएको अर्थनीति र त्यसानुकुल बनाइएका अरु सामाजिक नीतिले दलाल पुँजिवादी गठबन्धनलाई हिजोको भन्दा बढी बलियो बनायो। बाँकी रहेका चिजहरुमा पनि लाज सरम केही नमान्ने बनाएर बन्धनहरु चुडालेर फुक्काफाल बनाइदियो। बरु हिजो पञ्चहरुलाई डर हुन्थ्यो होला, तर अब कांग्रेसहरुलाई डर नहुने भयो। यसरी एउटा नयाँ मुल्यसहित दलाल पुँजिवादले आफ्नो एउटा निर्वस्त्र स्वरुपमा आयो। त्यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन थियो, सकेन। र त्यो पनि सकियो।
हामीले यो गण्तन्त्र ल्यायौँ। यो गणतन्त्रको नेता आज कम्युनिष्ट पार्टी छ। यही नेपालको आजको सन्दर्भ हो। यसको अर्थतन्त्र र आधार भनेको दलाल पुँजिवादी छ। र राज्यको मोटामोटी स्वरुप हामीले उस्तै रोजेका हौँ। पेरिस कम्युनपछि माक्र्सले यसको शिक्षा के हो भनेर सोध्दा ‘पुरानो बनिबनाउ सत्ता लिएर नयाँ व्यवस्था बन्न सक्दैन’ भनेका छन्। पुरानो व्यवस्थाको जुन मेसिनरी छ, त्यसको कानुन छ, निमयहरु छन्, यो सबैलाई बदलेर नभई केही बाहेक जस्ताको तस्तै ग्रहण गरेका छौँ। एकातिर दलाल पुँजिवादलाई जस्ताको तस्तै ल्याएर आएका छौँ, अर्कोतिर हाम्रो नाम कम्युनिष्ट पार्टी छ। हामी जानुपर्ने समाजवादमा छ, संविधानमा नै त्यो कुरा लेखिएको छ। तर हामी दलाल पुँजिवादको वर्चस्व भएको समाजमा छौँ। आजको प्रश्न ‘यो दलाल पुँजिवाद फेरिन्छ कि फेरिदैन ?’ भन्ने हो। ‘यदि त्यो फेरिएन भने हामी फेरिन्छौँ’ वा हामी त्यस अनुकुल हुनेछौँ, लेखेर राख्नुहोस्। वैतरणी तराउने कि के तराउने सबै उसैले तराउँछ। उसकै जिम्मामा कम्युनिष्ट पार्टी, उसकै जिम्मामा समाजवाद ! बोक्ने को हो समाजवाद भन्दा दलाल पुँजिवाद। दलाल पुँजिवादले बोक्ने समाजवादतिर जाने। आजको रंगमञ्च हो।
यो एउटा प्रणाली हो। यसको विकल्पमा कुन व्यवस्था हो भनेर हाम्रो छलफल हुनुप¥यो। त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ ? समाजवादमा जानका लागि कसैले कर्मचारीतन्त्र ठिक भएन भनेको छ, कसैले राम्रो पूर्वाधार भएन भनेको छ, अझैँ दुर्त गतिमा आर्थिक उत्पादन बढेन आदि अनेक तर्क गरेका छन्। मलाई लाग्छ, यो जे–जे गरे पनि क्रान्ति अलमलिने कुरा मात्रै हो। मुख्य कुरा व्यवस्था नै हो, त्यसका लागि पार्टीहरु स्वयं समाजवादी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ। यदि समाजवाद ल्याउने हो भने ल्याउने त कोही हुनुपर्ला नि ! यो दार्शनिक प्रश्न पनि हो।
आजको समयमा त्यो कम्युनिष्ट पार्टी नै हो। यतिका वर्षसम्म लडेर समाजवादको झण्डा समाएर त्यसका वरीपरी गोलबन्द भएको, गीत गाएको, नाचेको, नारा लाएको, दुःख पाएको, जेल बसेको, मरेको सबै योद्धाको ठाउँ आज यही पार्टी हो। यहाँभन्दा बाहिर समाजवाद खोज्न सकिन्छ भन्यो भने त्यो कल्पना मात्रै हुनेछ। फेरि यससँगै के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा हामी सरकारमा गएको करिब तीस वर्ष भयो। तीस वर्ष कम्युनिष्ट पार्टी सरकारमा बसेको मुलुकमा अझैँ पनि छुवाछुत छ। यस्ता विरोधाभास हेर्ने हो कति वटा होलान् ? एकातिर समाजवादकै लागि भनेर लाखौँ मान्छे हाम्रा वरीपरी लाम लागेका छन्। तर वर्षौँदेखि सरकार चलाइरहेको हाम्रो पार्टी, विशेषगरी हाम्रो पार्टीको नेतृत्व फेरिदैँ–फेरिदैँ गएर नाम छोड्दीने हो भने मान्छे अन्यौलमा पर्ने अवस्था छ। आज अर्को देशको मान्छेले शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल वा घनश्याम भुषालको पार्टी के हो भन्यो भने यसको जवाफ एउटै आउँछ।
त्यसैले यसको एउटै सर्त लेनीनले भनेजस्तो ‘क्रान्ति सफल पार्नु छ भने पहिले राम्रो पार्टी बनाउनु पर्छ।’